के फेरि काठमाडौंमा लकडाउन हुँदैछ ? के जनताले नै माग गर्न थाले लकडाउन ?? – Butwal Sandesh
के फेरि काठमाडौंमा लकडाउन हुँदैछ ? के जनताले नै माग गर्न थाले लकडाउन ??
काठमाडौं । दिनदिनै कोरोना सं*क्रमितको संख्या बढेसँगै जनस्तरबाटै लकडाउनको माग उठ्न थालेको छ । बिहीबारदेखि नै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले फेरि लकडाउनको माग थालेका हुन् ।
कोरोना सं*क्रमण तिब्र फैलिन थालेपछि काठमाडौं उपत्यकामा फेरि कडा खालको लकडाउन गर्ने सरकारले तयारी गरेको छ । उपत्यकामा पछिल्ला केही दिनदेखि एकाएक सं*क्रमित बढेपछि म*हामारीको ‘इपिसेन्टर’ बन्ने खतरा भएको भन्दै यस्तो तयारी गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।
सरकारले गत ११ चैतदेखि घोषणा गरेको लकडाउन ६ साउनबाट अन्त्य गरेको थियो । हाल बजार, छोटो दूरीका सार्वजनिक यातायात, उद्योग, कलकारखाना र सरकारी कार्यालय खुलेका छन् । लकडाउन खुलेसँगै मानिसहरुमा सचेतनाको पक्ष कमजोर देखिँदा सं*क्रमणको जो*खिम उच्च भएको छ । पछिल्लो समय उपत्यकामा दैनिक ५० जना हाराहारीमा सं*क्रमित देखिन थालेका छन् ।
उच्च सरकारी अधिकारीहरुले पनि फेरि लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले तयारी गर्दै गर्नुपर्ने सुझाव प्रधानमन्त्री कार्यालय र कोभिड–१९ सं*कट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) मा दिन थालेका छन् ।
स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना सं*क्रमण बढ्दै गएको विषयमा अब के गर्नेबारे मन्त्रालयलका उच्च अधिकारीसँग छलफल थालेको बताइएको छ । अहिलेकै रेसियोमा कोरोना सं*क्रमित बढ्न थाले काठमाडौं उपत्यकाको अवस्था भ*यावह हुने अवस्था छ ।